ဦးဇာဂနာနှင့် ကလင်တန်တို့ တွေ့ဆုံကြပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဦးဇာဂနာနှင့် ကလင်တန်တို့ တွေ့ဆုံကြပြီ
ဦးဇာဂနာနှင့် ကလင်တန်တို့ တွေ့ဆုံကြပြီ
Posted by manawphyulay on Feb 9, 2012 in Photography | 14 comments
ဦးဇာဂနာနှင့် ကလင်တန်တို့ တွေ့ဆုံခြင်း
U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton greets Burmese comedian and recently-released former political prisoner Zaganar at the U.S. Department of State in Washington, D.C., on February 8, 2011. [State Department photo/ Public Domain]
အဲဒီမျက်မှန်နဲ့အလယ်က ရပ်နေသူက ကိုအောင်ဒင်(ခေါ်) ချစ်ကိုကို(ခေါ်)
သူ့ညီကတော့ ခင်ဗျားတို့နှစ်သက်တဲ့ဆရာတာရာမင်းဝေ (ခေါ်)
ရွှေဘုန်းလူ (ခေါ်) ချစ်ညီညီ(ခေါ်) နောက်ဆုံး တာရာမင်းဝေ ကလောင်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်။
ကိုအလင်းဆက် ဟုတ်ဝူးလေ ဘဘဦးသစ်မင်းရယ်…. ဒူ့ကို ကျောကျတာလဲရို့… ခုလိုပြောတော့လည်း သိသွားတာပေါ့။ သူက အဲဒီမှာ ဘယ်တုန်းက ရောက်ပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲဟင်…
ကိုအလင်းဆက်က တာရာမင်းဝေ အသဲစွဲ။ ပို့စ်တောင်တင်ထားတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ သဘောပေါက်ပါပြီရှင်။ အတော်တော့ စာရေးကောင်းမယ့်သူဖြစ်မယ်နော်။ ကဗျာတွေလည်း ဖတ်ချင်တယ် သဂျီးရေ အဆင်ပြေရင် တင်ပေးလို့ရမလားရှင့်။ လေ့လာချင်လို့ပါနော်။
ကိုအောင်ဒင်က.. အခုမြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ အမေရိကပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ အင်မတန်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတာပါ..။ သူက..US Campaign for Burma တည်ထောင်သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်လေ…။
ကဗျာဆရာတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒဿ လို့မှတ်မိတယ်..။
ဒါဆို ကျောင်းဖွင့်ချိန်ဆိုတဲ့ ကဗျာကိုရေးတာက ရွှေဘုန်းလူ (တာရာမင်းဝေ)လား.. သို့မဟုတ်
တာရာမင်းဝေ ( ဒဿ) လား.. သိရင်လင်းပေးပါဦး နော်..
ကိုအောင်ဒင်ကို မြင်ဖူးပေမယ့် ကိုသစ်ပြောမှပဲ ရာဇ၀င်ကို သိရတော့တယ်။
Special present for အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ
Credit to http://burma.irrawaddy.org/archives/5928
အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန်က ၀ါရှင်တန် ဒီစီ မြို့တွင် တွေ့ဆုံသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အားပေးသည့် အနေဖြင့် တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဇာဂနာက“ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ တိုးတက်မှုက အခုမှ အစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်စရာတွေကို လုပ်ဖို့ ကျနော် တို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့အတွက် အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်”ဟု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၌ မစ္စ ဟီလာရီ နှင့် တွေ့ဆုံမှု အပြီးတွင် ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ကိုဇာဂနာသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ခရီးစဉ် အနေနှင့် ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ် သည်။
မစ္စ ဟီလာရီနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် လူရွှင်တော် ဇာဂနာနှင့်အတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ(NDF)မှ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် တို့လည်းပါဝင်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ၏ ထုတ်ပြန် ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသို့ အမေရိကန် ထိပ်တန်းအရာရှိများ တွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကိစ္စ၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာများ၊ တိုင်းရင်းသား အရေး ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
“တွေ့ရတာ အရမ်းအားရမိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားပေးမှုတွေကို တကယ်ပဲ အထူး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျမ သူ့ကို ပြောခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပေါ့။ အမျိုးသမီးအရေးကို သူတကယ်စိတ်ဝင်စား တယ်လို့ ကျမထင်တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးအရေး ပိုတိုးတက်အောင် အားပေးဖို့ ကျမ သူ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်”ဟု ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်က ပြောသည်။
ကိုဇာဂနာ တို့ ၃ ဦးသည် အမေရိကန်ရှိ National Endowment for Democracy(NED) ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အမေရိကန် သို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်ကလည်း NED တွင် အရပ်သား အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အမြင်သဘောထားများအား ကို ဇာဂနာနှင့် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူများအပါအ၀င် အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တချို့နှင့် NED မှ တာဝန်ရှိသူများ ဆွေးနွေး ဖလှယ်ခဲ့သေးသည်။
ကိုဇာဂနာသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ဖြင့်၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလလယ်က ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့သည်။ ၎င်းကို အစိုးရက၂၀၀၈ ခုနှစ်က နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒုက္ခသည်များ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေစဉ် ဖမ်းဆီး၍ ထောင် ၃၅ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ထောင်မှပြန်လွတ်ပြီးနောက် ကိုဇာဂနာသည် ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံများသို့ ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် ရုပ်ရှင်နှင့် အနုပညာဆိုင်ရာ လေ့လာရေး ထွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ကူညီပေးခြင်းများနှင့် လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင် ပွဲတော်ကိုလည်း ဦးစီးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန်သည် ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ကိုဇာဂနာနှင့် ရန်ကုန် တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သေးသည်။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတဦးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်။
ယင်းခရီးစဉ် အတွင်း မစ္စ ဟီလာရီသည် သမ္မတ ဦးသိန်စိန်နှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုလည်း အသီးသီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အမေရိကန်က အားပေးထောက် ခံ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်က ကိုဇာဂနာ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ ကလင်တန်နှင့်တွေ့ဆုံ
ကိုဇာဂနာက ခင်ညွန့်နဲ့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရေတောင် မတိုက်ဟု အင်တာဗျူးတခုတွင် ပြော
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၂
ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ နေ့ခင်း၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ အစုိုးရရုံးတော်တွင် မြန်မာပြည်က ခေတ္တလာရောက်သူ နိုင်ငံအရေး နိုးကြားလှုပ်ရှားသူများဖြစ်သည် ကိုဇာဂနာ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ကို အစုိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟယ်လရီကလင်တန်က လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်ကို တွေ့ရစဉ်။
( ဖော်ရိန်းပေါ်လစီအမည်ရ စာစောင်တွင် ပါသော အင်တာဗျူး) အထက်ပါ စာစောင်၏ အင်တာဗျုးတွင် ကိုဇာဂနာက မိမိနှင့် မကြာသေးမီက လွတ်မြောက်လာသူ စစ်အစုိုးရ၏ ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင် ဗုိုလ်ခင်ညွန့် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို ရက်စက်စွာ နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲခဲ့သော ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးခင်ညွန့်အပါအ၀င် ထောက်လှမ်းရေးသမားများကိုပါ လွတ်မြောက်စေချင်သည်ဟု မိမိက ပြောခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းနောက် ဗိုလ်ခင်ညွန့် လွတ်မြောက်လာကြောင်း၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က မိမိနှင့် လူချင်းတွေ့ပြီး ကျေးဇူးတင်လိုသည်ဟု ပြောဆိုသဖြင့် ခင်ညွန့်၏ ကျေးဇူးတင်ခြင်းကို ခံယူရန် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊
အဆိုပါ ခင်ညွန့်သည် နန်းတော်ကဲ့သို့ အိမ်တော်ကြီးတွင်းရှိ ကြီးကျယ်သော တီဗီအပြားကြီး ရှိသည့်အခန်းထဲတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်း၊ ဒါဇင်ဂဏန်းမကရှိသော ဟင်းဖုန်းများ အခန်းထောင့်တွင် ပုံထားကြောင်း၊ စာပွဲပေါ်တွင် i-PAD အိပ်ဆောင်ကွန်ပျူတာတလုံး ရှိကြောင်း၊ လာရောက်နှုတ်ဆက်သူများကို အမေရိကန် ၁၀ ဒေါ်လာခန့် တန်ဖိုးရှိသည့် မုန့်ဖိုးပေးနေကြောင်း ဇာဂနာက အဆိုပါ အင်တာဗျူးတွင် ပြောဆိုထားသည်။
ခင်ညွန့်က ၎င်းကျုးလွန်ခဲ့သော မတရားမှုများအတွက် တောင်းပန်လိုသည့် သဘောထားရှိမရှိကို ဇာဂနာက ဖြေကြားခြင်းမရှိဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါကိစ္စမှာ ပြည်သုနှင့် ခင်ညွန့်တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ခင်ညွန့်က ဧည့်သည်ဖြစ်သူ မိမိကို ၁၅ မိနစ် ခန့်တွေ့ဆုံသည့်အချိန်အတွင်း ရေ၊ ကော်ဖီ သို့မဟုတ် ဘီယာနှင့်တောင် ဧည့်ခံဖော်မရဟု ရယ်သွမ်းသွေး ပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုသစ်မင်း ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါဗျ။
ဒေါ်မနောရေ ပို့စ် အတွက် ကျေးဇူးနော
မြစ်ဆုံ ကိစ္စ အစပျိုးခဲ့တာ ကိုအောင်ဒင် လို့ ထင်တယ်
ဆရာသစ် ရေ အဲဒီအမြင်လေး မှန် မမှန် လဲ ကူညီပေးပါဦးခင်ဗျာ
ကိုအောင်ဒင် အပေါ်ကစာကိုပို့လာတော့.. တော်တော်စောပါတယ်..။ ဘယ်မီဒီယာကိုမှ မတင်သေးပါဘူး..။
အဲဒီအချိန်မှာ.. ဧရာဝတီကိုကယ်ဖို့က.. .. ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ကြ.. မနှိုးဆော်ကြသေးပါဘူး…။
ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ လုပ်နေပေမဲ့.. လူသူသိပ်မသိပါဘူး…
ခရက်ဒစ်ပေးဆိုရင်.. ကိုအောင်ဒင်ကို အများဆုံး ပေးရမယ်လို့.. ထင်ပါကြောင်း…။
ပြည်တွင်း မှ ကျွန်တော်များ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးရန် လက်လှမ်းမမီ ကြောင်းပါ ခင်ဗျား